ပျံသန်းနေသောခွပ်ဒေါင်းတကောင်: 10/1/09 - 11/1/09
ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင် ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဖို့ နိုဘဲလ်ဆုရှင်များ တောင်းဆို
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပခင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား အားလုံးကို လွှတ်ပေးဖို့ လိုတယ်လို့ နိုဘဲလ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် အမျိုးသမီးများအဖွဲ့က တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ တိဘက်ဒေသမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ တိုးတက်ကောင်းမွန်ခြင်း မရှိဘဲ တဖြည်းဖြည်း ပိုမိုဆိုးရွားလာနေတဲ့ အခြေအနေတွေကို မီးမောင်းထိုးပြဖို့အတွက် ဒီ နိုဘဲလ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် အမျိုးသမီးများအဖွဲ့က အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူးဒေလီမြို့မှာ ဒီကနေ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပခဲ့တာပါ။ အပြည့်အစုံကို ကိုဇော်ဝင်းလှိုင်က တင်ပြပေးထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ တိဘက်ဒေသတွေမှာ ဒီကနေ့ ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေကို ရှင်းပြဖို့အတွက် အိန္ဒိယနိုင်ငံက သတင်းထောက်များ အသင်းမှာ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ လုပ်ခဲ့ကြတဲ့ နိုဘဲလ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် အမျိုးသမီးများ အဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံက ဂျိုဒီ ၀ီလီယံစ် (Jody Williams) နဲ့ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံက မိုင်းရက်ဒ် မဂွိုင်းရား (Maired Maguire) တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။
သူတို့က မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ တိဘက်ဒေသတွေမှာ နိုင်ငံရေးအရ လွတ်လပ်မှု မရှိတာတွေ၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံနေရတာတွေကို မီးမောင်းထိုးပြလိုတဲ့အတွက် အခုလို သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ် ပြောကြားခဲ့ကြတာပါ။ ဒီ နိုဘဲလ်ငြိမ်းချမ်းရေး ဆုရှင်တွေနဲ့အတူ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲကို ပူးတွဲကျင်းပခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသမီးများ အဖွဲ့ချုပ် (WLB) က မသင်းသင်းအောင်က ဒီကနေ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ နိုဘဲလ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်တွေ ပြောကြားခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဗွီအိုအေကို အခုလို ပြောပြပါတယ်။
“ဒီ Noble Women Initiative က ဦးဆောင်တဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့ နိုဘဲလ်ဆုရှင် အမျိုးသမီး ၂ ယောက်က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ လုပ်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေတွေကလည်း အခုထက်ထိ ဘာမှ ကောင်းမွန်တိုးတက် ပြောင်းလဲလာတာ မရှိသေးဘူး။ အခု အနှစ် ၂၀ ကျော်ရှိပြီ။ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၂,၀၀၀ ကျော်ကလည်း ရှိနေဆဲပဲ ဖြစ်တယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင်လည်း အဖမ်းခံနေရဆဲပဲ ဖြစ်တယ်။
“အဲဒါကြောင့် အခုလာမယ့် ၂၀၁၀ မှာ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်လို့ နအဖက ကြေညာထားတာတော့ ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီမတိုင်ခင်မှာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား အားလုံး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် လွှတ်ပေးဖို့ လိုတယ်။ ပြီးတော့မှ တကယ် တရားမျှတပြီး လွတ်လပ်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေ ဖြစ်ဖို့ဆိုရင် အဲဒီမတိုင်ခင်မှာ အားလုံးကို ပါဝင်ခွင့်ရှိအောင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရမယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကိုလည်း ပြန်ပြီး Review လုပ်ဖို့ လိုတယ်ပေါ့။ အဲဒါတွေ သူတို့ပြောသွားတယ်။”
ဒါ့အပြင် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်း အနေနဲ့လည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက် ပါးစပ်က အပြောချည်း မဟုတ်ဘဲ လက်တွေ့ အကောင်အထည် ပေါ်လာအောင် ကူညီလုပ်ဆောင်ဖို့ လိုအပ်တယ် ဆိုတာကိုလည်း နိုဘဲလ်ငြိမ်းချမ်းရေး ဆုရှင်တွေက ထည့်သွင်း ပြောကြားသွားကြပါတယ်။
“နိုင်ငံတကာ အနေနဲ့လည်း ပါးစပ်ကပဲ ပြောနေတာ မဟုတ်ဘဲနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်လာဖို့အတွက်ကို တကယ်တမ်း ထိရောက်စွာ ကူညီဖို့ လိုတယ်။ အခုလောလောဆယ် အမေရိကန်ကနေပြီး ပေါ်လစီတွေ ပြောင်းပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ ချဉ်းကပ်မှုတွေကို ပြောင်းတဲ့နေရာမှာလည်း နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့ ချဉ်းကပ်မှုအရ တကယ်ထိရောက်တဲ့ ပြောင်းလဲမှုကို ဦးတည်သင့်တယ်ပေါ့။ အမေရိကန် အစိုးရရဲ့ ပြောင်းလဲတဲ့ ဥပဒေကလည်း တကယ်တမ်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ တိုးတက်တဲ့၊ ကောင်းမွန်တဲ့၊ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အပြောင်းအလဲတွေ မဖြစ်မခြင်းကတော့ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းအနေနဲ့ အရေးယူ ပိတ်ဆို့မှုတွေကို ဆက်ပြီး ထားသင့်တယ်ပေါ့။”
WLB မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသမီးများ အဖွဲ့ချုပ်ဟာ နိုဘဲလ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် အမျိုးသမီးများအဖွဲ့နဲ့ ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်တာကြောင့် အခုလို သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပူးတွဲကျင်းပတာ ဖြစ်ပြီး ရှေ့နှစ် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဧပြီလအတွင်းမှာလည်း ၂ ဖွဲ့ပေါင်းပြီး လူ့အခွင့်အရေးတွေ ချိုးဖောက်ခံနေကြရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေအတွက် ခုံရုံးဖွဲ့ ကြားနာမှုတွေ ပြုလုပ်သွားဖို့လည်း စီစဉ်ထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
နိုဘဲလ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ကို နိုဘဲလ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် အမျိုးသမီး ၆ ယောက်နဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာ ဖြစ်ပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက နိုဘဲလ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပါ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ထည့်သွင်းပြီး ၇ ယောက်အဖွဲ့လို့ သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်နဲ့ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း ခံထားရတာကြောင့် သူတို့နဲ့အတူ ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပါဝင်နိုင်ခြင်း မရှိတာကြောင့် သူတို့အနေနဲ့လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေးအတွက် တစိုက်မတ်မတ် ကြိုးစား လုပ်ဆောင်နေကြတာပါ။
တိဘက် အဝေးရောက်အစိုးရ တည်ထောင်တဲ့ နှစ် ၅၀ မြောက် အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ တိဘက်ဘုန်းတော်ကြီး ဒလိုင်း လားမား (Dalai Lama) က ဒီ နိုဘဲလ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ကို ဖိတ်ကြားခဲ့တာကြောင့် သူတို့ အိန္ဒိယနိုင်ငံကို ရောက်ရှိနေကြရာက အခုလို ပူးတွဲ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ( ဗွီအိုအေ )
နာရေးကူညီမှုအသင်းကို မြောက်ဒဂုံစည်ပင် တရားစွဲ
နာရေးကူညီမှုအသင်းကို မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် စည်ပင်သာယာက ယနေ့တရားစွဲဆိုလိုက်သည်။
“စည်ပင်က ဒီနေ့စပြီးတရားစွဲတယ်။ ကျနော်မသွားဘူး။ ရုံးက မန်နေဂျာကိုပဲ လွှတ်လိုက်တယ်။ အမှုက စည်ပင်ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ အဆောက်အဦအသုံးပြုလို့တဲ့။ ဒါပေမယ့် ဒီနေ့တရားရုံးက အစွဲဆိုခံ ကာယကံရှင် မပါလို့ဆိုပြီး အမှုကိုတော့ လက်မခံလိုက်သေးဘူး” ဟု နာရေးကူညီမှုအသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်သူက ပြောသည်။
မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်စည်ပင်က တောင်ဒဂုံမြို့နယ် တရားရုံးတွင် အမှုစွဲတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ရာ မြို့နယ်မတူသည့် တရားရုံးတွင် အမှုစွဲတင်သည့်အပေါ်လည်း နားမလည်နိုင်ဖြစ်ရသည်ဟု ဦးကျော်သူက ပြောသည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ၊ ကျနော် အစောကြီးကတည်းက ပြောပြီးသား စွဲချင်တဲ့နေရာမှာစွဲ။ ကျနော်မသွားဘူး။ ဖမ်းချင်ရင် လာသာဖမ်း။ လိုက်သွားရုံပဲ။ စည်ပင်ကတရားစွဲဖို့ ပြင်နေစဉ်က မေးတယ်။ ဘယ်သူ့နာမည်တပ်ရမလဲတဲ့။ ကျနော်က အသင်းမှာ အကြီးဆုံးဖြစ်တော့ ကျနော့်နာမည်တပ်စွဲလို့ ပြောပြီးသား” ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။
နာရေးကူညီမှုအသင်းသည် မူလက သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ဗြဟ္မ၀ိဟာရ ဘုန်းကြီးကျောင်းတိုက်တွင် အခြေစိုက်ကာ အခမဲ့ နာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊ ဆေးကုသပေးခြင်းတို့ ပြုလုပ်နေရာမှ စည်ပင်ကပင် ပိတ်ပင်ခဲ့သည့်အတွက် ပြီးခဲ့သည့် ဇူလိုင်လ (၁၉) ရက်တွင် မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်သို့ ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
နာရေးကူညီမှုအသင်းပိုင် မြေ (၂) ဧကကျော်ပေါ်တွင် ကျပ်သိန်း (၂,၀၀၀) ၀န်းကျင်ကုန်ကျသည့် အဆောက်အဦကို စည်ပင်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် တည်ဆောက်ခဲ့သော်လည်း ခြံဝင်းရှေ့တွင် ရေမြောင်းမတူးသည့်အတွက်ဟုဆိုကာ မြောက်ဒဂုံစည်ပင်က အဆောက်အဦအသုံးပြုခွင့် မပေးနိုင်ဟု ငြင်းဆန်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထိုကဲ့သို့ ရေမြောင်းတူးခိုင်းနေခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဦးကျော်သူက “(၅) ပေ အကျယ်၊ (၅) ပေအနက် ရေမြောင်းတူးခိုင်းနေတာ။ ကျနော်တို့ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဘယ်သူမှ မတူးဘဲ ကျနော်တို့ ရှေ့လေးတင် ကွက်တူးထားရင် ရေလှောင်ကန်လို ဖြစ်သွားမှာဗျ။ ရေက ဘယ်ကိုမှ စီးစရာမရှိဘဲ ခြင်ဖောက်ကန်လိုဖြစ်သွားမယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့က မတူးတာ။ နောက်တခုက ကျနော်တို့က ဟိုကနေ ပြောင်းဆိုလို့ ကမန်းကတန်းပြောင်းလာရတာ။ ကုလက်စ လူနာတွေက ရှိသေးတယ်။ ဒီ အဆောက်အဦ အသုံးပြုခွင့်ဆိုတာကြီး ကျလာဖို့ စောင့်မနေနိုင်ဘူး” ဟု ရှင်းပြသည်။
လမ်း၊ တံတား၊ ရေမြောင်းဖောက်လုပ်ရသည့်အလုပ်မှာ နိုင်ငံတော်ပိုင်အခွန်ဘဏ္ဍာငွေဖြင့် မြို့တော်စည်ပင်သာယာက လုပ်ဆောင်ရမည့် အလုပ်ဖြစ်သော်လည်း စည်ပင်က လူထုကိုသာ ခိုင်းလေ့ရှိသည်ဟု ရန်ကုန်မြို့ခံတဦးက ပြောသည်။
နာရေးကူညီမှုအသင်းကို ယနေ့ တရားရုံးက လက်မခံသေးသော်လည်း ရှေ့ဆက်ဖြစ်လာမည့်ပြဿနာများကို ရင်ဆိုင်သွားမည်ဟု ဦးကျော်သူက ပြောသည်။
“နောက်ရက် ဘာဖြစ်လာမလဲတော့ မသိနိုင်သေးဘူး။ ကျနော်ကတော့ တရားစွဲလည်းစွဲ။ ထောင်ချလည်းချ။ အသင်းလုပ်နေရတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကတော့ ရပ်ထားလို့မဖြစ်ဘူးဗျ။ သူတို့ ဆက်ပြီး တရားစွဲမယ်ဆိုလည်း စွဲပေါ့ဗျာ။ အခမဲ့ ဆေးကုပေး၊ မသာချပေးနေတဲ့ အသင်းကို ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ အဆောက်အဦအသုံးပြုမှုနဲ့ တရားစွဲတယ်ဆိုတော့ ကမ္ဘာမှာ ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ် ကောင်းတဲ့အမှုကြီး တခုဖြစ်သွားတာပေါ့” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းတွင် ပါရဂူဘွဲ့ရဆရာဝန်ကြီးများအပါအ၀င် ဆရာဝန် (၃၀) ခန့်က အခမဲ့ပညာအလှူပြု ကုသပေးလျက်ရှိပြီး အသင်းတွင် လုပ်အားဒါနပေးလှူနေကြသော စေတနာ့ဝန်ထမ်း (၂၀၀) ကျော်လည်း ရှိသည်။
အသင်းမှ ဖွင့်လှစ်ထားသည့် သုခဆေးခန်းသည် ရန်ကုန်မှ နွမ်းပါးသည့် လူနာများအတွက် အထူးအားထားရာ အခမဲ့ဆေးခန်းဖြစ်ပြီး တနေ့လျှင် လူနာပေါင်း (၂၀၀) ကျော်ကုသပေးနေရပြီး နာရေးကူညီမှုအနေဖြင့်လည်း တရက်လျှင် နာရေးဝန်ဆောင်မှုပေါင်း (၃၀) ၀န်းကျင်ခန့် ဆောင်ရွက်ပေးနေရသည်။ ( ခေတ်ပြိုင် )
Posted by flyingpeacock at 9:34 PM0comments Links to this post
ထောင်ဒါဏ် ၁၅ နှစ် ချမှတ်ခံထားရသူ သားစိုးလေးရဲ့ရဲဘော်/ဘက်တွေရဲ့ ပြောစကားများ
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ သတင်းစာဆရာကြီး အဘဦးဝင်းတင်၏ မွေးနေ့
Posted by flyingpeacock at 8:22 PM0comments Links to this post
Posted by flyingpeacock at 9:24 PM0comments Links to this post
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးထဲ ဒေါ်စု ပါဝင်နိုင်၊ ၀န်ကြီးချုပ်သိန်းစိန် ပြောဆို
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားတဲ့အကြောင်း မြန်မာစစ်အစိုးရ ၀န်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန်က အာဆီယံ ခေါင်းဆောင်တွေကို ပြောဆိုသွားပါတယ်။ ဒီနေ့ ပြီးဆုံးသွားတဲ့ အာဆီယံ ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကနေ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘာတွေများ ရလဒ် ထွက်ခဲ့သလဲ၊ မြန်မာအစိုးရကရော နိုင်ငံရေး ပြောင်းလဲမှုအတွက် အာဆီယံကို ဘယ်လို ကတိက၀တ်တွေများ ပေးခဲ့သလဲ၊ အာဆီယံ ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲရှိတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ ချအမ်းမြို့မှာ ရောက်နေတဲ့ ဗွီအိုအေ၀ိုင်းတော်သား ကိုသိန်းထိုက်ဦးကို ကိုသားညွန့်ဦးက ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီး တင်ပြပေးထားပါတယ်။
ကိုသိန်းထိုက်ဦးခင်ဗျား၊ အာဆီယံ အစည်းအဝေးက ဒီနေ့ နောက်ဆုံး ပြီးသွားပြီဆိုတော့ အာဆီယံ အစည်းအဝေးကြီးကနေ ဒေသနဲ့ပတ်သက်လို့ ဘယ်လိုအကြောင်းအချက်တွေကို ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်ခဲ့ပါသလဲ၊ အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်လို့ရော ဘာတွေများ ဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့ကြပါသလဲ။
“ဟုတ်ကဲ့၊ ဒီနေ့ ၁၅ ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ ထိပ်သီးစည်းဝေးပွဲကတော့ ပြီးသွားပါပြီ။ ထုံးစံအတိုင်း အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင် ၁၀ နိုင်ငံနဲ့ ဆွေးနွေးဘက်နိုင်ငံ ၆ နိုင်ငံကြားမှာ လွတ်လပ်တဲ့ ကုန်သွယ်ရေုးဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်တွေ ချမှတ်နိုင်ရေးအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့ ခြေလှမ်းတွေ၊ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲလာမှုနဲ့ ကမ္ဘာတ၀န်း ကြုံနေရတဲ့ စီးပွားရေး အကျပ်အတည်းတွေကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းမလဲဆိုတဲ့ ကိစ္စတွေကို သဘောတူလက်မှတ်တွေ ဒီနေ့ တော်တော်လေး ရေးထိုးဖြစ်ကြတာ တွေ့ရပါတယ်။
“မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပေါ်မှာ စစ်အစိုးရက ချမှတ်ထားတဲ့ ပြစ်ဒဏ်ကို စစ်အစိုးရဘက်က လျှော့ကောင်းလျှော့မယ်ဆိုပြီး ဂျပန်နိုင်ငံဘက်က ပြောခဲ့တဲ့ သတင်းတွေ ထွက်လာခဲ့တော့ ဒီကိစ္စက တော်တော်လေး စိတ်ဝင်စားခဲ့ပါတယ်။ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် အဘီဆစ် ၀ိတ်ချာချီဝ (Abhisit Vejjajiva) ကတော့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန်ဘက်က ပြောကြားချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခုလိုပြောပါတယ်။
“မြန်မာစစ်အစိုးရ ၀န်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ထိတွေ့ဆွေးနွေးမှုတွေ ရှိနေတယ်ဆိုတာကို အတည်ပြု ပြောဆိုခဲ့ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ့ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးမှာ အခန်းကဏ္ဍတခုက ပါဝင်နိုင်မယ်လို့ သူ့အနေနဲ့ အကောင်းမြင် မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်း ပြောဆိုသွားတယ်ဆိုပြီး ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် အဘီဆစ် ၀ိတ်ချာချီဝက ပြောသွားပါတယ်။”
တဆက်တည်းပဲ အာဆီယံ ကြေညာချက်ထဲမှာ ကျနော် သတိထားမိသလောက် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို တရားမျှတဖို့ဆိုပြီး တွန်းအားပေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ အာဆီယံ ခေါင်းဆောင်တွေကလည်း ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တွန်းတွန်းတိုက်တိုက် ပြောနေတဲ့အခါကြတော့ မြန်မာအစိုးရဘက်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန်ကရော ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုမျိုး ကတိတွေများ ပေးတာရှိသေးလဲ ခင်ဗျ။
“ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် အဘီဆစ် ၀ိတ်ချာချီဝကို မေးကြည့်တော့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန်က အာဆီယံနဲ့ ဆွေးနွေးဘက် နိုင်ငံတွေရဲ့ ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေး ဖြစ်ပေါ်တိုးတက် ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်လို့ ရှင်းပြခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းကြည်ကို အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးမှာ အခန်းကဏ္ဍတခုက ပါဝင်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်း ပြောပေမဲ့ တကယ်တမ်းကြတော့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါဝင်ခွင့် ပေးမယ်၊ မပေးဘူးဆိုတာကို တိတိကျကျ ပြောမသွားပါဘူး။ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် အဘီဆစ် ၀ိတ်ချာချီဝကတော့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန်ဘက်က ပြောကြားတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခုလိုပြောသွားပါတယ်။
“မြန်မာစစ်အစိုးရ ၀န်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန်က ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေကို စတင် ပြင်ဆင်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်း ရှင်းပြခဲ့ပြီး ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာ အများလက်ခံနိုင်တဲ့ မျှတပြီး လွတ်လပ်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတခု ဖြစ်ဖို့အတွက် နိုင်ငံတကာက လိုလားတယ်ဆိုတာ သူတို့အနေနဲ့ သိရှိတဲ့အကြောင်း၊ အသိအမှတ် ပြုတဲ့အကြောင်း ၀န်ခံပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်က ပြောသွားပါတယ်။
“ဒါပေမဲ့ ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံ ပါဝင်ခွင့်ပေးတာကို နိုင်ငံတကာက လိုလားနေတယ်ဆိုတာ သူ့အနေနဲ့ သိရှိကြောင်း ပြောသွားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းတွေ ဘယ်လောက်အထိ ပါဝင်ခွင့်ပေးမယ်၊ ယုတ်စွအဆုံး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေး ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေကို မြင်ချင်တဲ့အတွက် ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်က သူကိုယ်တိုင် မြန်မာနိုင်ငံကို သွားပြီးတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ချင်ပါတယ်လို့ ပြောတာကိုတောင်မှ မြန်မာစစ်အစိုးရဘက်က တိတိကျကျ ပြန်လည်ဖြေကြားတယ် ဆိုတာမျိုး ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနေနဲ့ ပြောသွားတာ မတွေ့ရပါဘူး။
အာဆီယံကလည်း မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အပြုသဘော ဆက်ဆံရေးမူကို တောက်လျှောက် ကျင့်သုံးခဲ့တယ်၊ အခုဆိုရင် အနောက်နိုင်ငံတချို့ ဆိုရင်လည်း သူတို့ရဲ့ မူဝါဒ ပေါ်လစီက ဒီလိုပေါ်လစီတွေ ဖြစ်လာတဲ့အခါကြတော့ အခု ဒီ အာဆီယံ အစည်းအဝေးမှာ မြန်မာအစိုးရကို အာဆီယံအနေနဲ့ ဘယ်လောက်အထိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြောင်းလဲရေးအတွက် တွန်းအားတွေ ပေးနိုင်လဲ၊ ဖျောင်းဖျနိုင်တယ်လို့ ယူဆလို့ရလဲခင်ဗျ။
“ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် အဘီဆစ် ၀ိတ်ချာချီဝ ပြောသွားတာကတော့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒေသတွင်း နိုင်ငံတွေတင် မဟုတ်ဘဲနဲ့ ဒေသပေါင်းစုံက နိုင်ငံတွေနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးကို သူတို့ ဆက်ပြီး တွန်းအားပေးသွားမယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အပြောင်းအလဲတွေ ပေါ်အောင် လုပ်သွားမယ်လို့ ပြောသွားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း အာဆီယံနိုင်ငံတွေက နိုင်ငံတကာက အာရုံစိုက်တဲ့ အစည်းအဝေး ကာလမျိုးတွေမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံက လူ့အခွင့်အရေး အကြောင်းကို ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ပြောတတ်ပြီးတော့ နောက်ပိုင်းမှာ အဖျားရှူးသွားတတ်တဲ့ အစဉ်အလာတွေလည်း ရှိပါတယ်။
“ဥပမာ အာဆီယံကိုယ်တိုင်က ဦးတည်ချက် တခုတည်းအောက်မှာ သွားနေတယ် ဆိုပေမဲ့ လူထုအဓိက လူ့အဖွဲ့အစည်း၊ Civil Society အဖွဲ့အစည်းမျိုးတွေကို အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ တော်တော်များများက အသိအမှတ် မပြုနိုင်သေးတာတွေ၊ ဒီအခက်အခဲတွေ ရှိနေတယ် ဆိုတာကိုလည်း ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် အဘီဆစ် ၀ိတ်ချာချီဝ ကိုယ်တိုင် ၀န်ခံသွားပါတယ်။
“အဲဒီတော့ ဒေသတွင်း နိုင်ငံတွေကြားမှာ ဒီမိုကရေစီ ဖွံ့ဖြိုးမှုတို့၊ လူထုအဓိက အဖွဲ့အစည်းတွေကို အသိအမှတ်ပြုဖို့ အခက်အခဲတွေ ရှိနေတဲ့အချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြောင်းလဲလာအောင် အာဆီယံကိုယ်တိုင် လုပ်နိုင်ဖို့ ဆိုတာကတော့ တော်တော် အလှမ်းဝေးတယ်လို့ ပြောရမှာပါ။”
အာဆီယံ ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ရောက်ရှိ သတင်းယူနေတဲ့ ကိုသိန်းထိုက်ဦးကို ကိုသားညွန့်ဦးက ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ( ဗွီအိုအေ )
Posted by flyingpeacock at 10:02 PM0comments Links to this post
လွတ်လပ်၍ တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ မြန်မာစစ်အစိုးကို အာဆီယံတိုက်တွန်း
ထိုင်းနိုင်ငံ ဟွာဟင်း အပမ်းဖြေစခန်းမှာ ကျင်းပနေတဲ့ အာဆီယံစည်းဝေးပွဲက မြန်မာနိုင်ငံမှာ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပဖို့ စစ်အစိုးရကို တိုက်တွန်းပြောဆိုနေကြပါတယ်။ အာဆီယံ အလှည့်ကျဥက္ကဌအဖြစ် တာဝန်ယူထားတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ ၀န်ကြီးချုပ်ကလည်း သူကိုယ်တိုင် မြန်မာနိုင်ငံကို သွားရောက်ပြီး မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံချင်တယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံ ၀န်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန်ကို ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး အဲဒီအစည်းအဝေးမှာ သတင်းတက်ရောက်ယူနေတဲ့ ဗွီအိုအေ ၀ိုင်းတော်သား ကိုသိန်းထိုက်ဦးက အခုလို ရှင်းပြပါတယ်။
"အခု (၁၅) ကြိမ်မြောက် ဟွာဟင်းမှာ ကျင်းပနေတဲ့ အာဆီယံ ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲဟာ ထိုင်းနိုင်ငံ အာဆီယံ အလှည့်ကျ ဥက္ကဌဖြစ်တဲ့ ကာလအတွင်းမှာ အရင်တခါကလည်း ပြည်တွင်းမငြိမ်သက်မှုနဲ့ ဆန္ဒပြပွဲတွေနဲ့ အစည်းအဝေးက ပယ်ဖျက်ခဲ့ရတာမျိုး ဖြစ်တော့ အခုတခါတော့ ထူးထူးကဲကဲ လုံခြုံရေးတွေ ချထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ စစ်တာဆေးတာတွေ လုပ်ပြီး ကျင်းပနေပါတယ်။ ဆန္ဒပြတဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း တက်ဆင်ကို ထောက်ခံတဲ့ အင်္ကျီနီဝတ်တဲ့သူတွေ တချို့တော့ အစည်းအဝေး ကျင်းပတဲ့နေရာနဲ့ တမိုင်လောက်အနီးထိ ရောက်လာတယ်လို့ ကြားရပေမယ့် တကယ်တမ်းကျတော့ ဆန္ဒပြပွဲလည်း မရှိပါဘူး။ အစည်းအဝေးကတော့ ခုချိန်ထိ ဒုတိယနေ့မှာ ချောချောမောမောပဲ တွေ့နေရပါတယ်။"
ဒီအစည်းအဝေးမှာ အဓိက ဆွေးနွေးကြတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကရော ဘယ်နိုင်ငံက အကြောင်းအရာတွေကို အဓိကထားပြီး ဆွေးနွေးကြပါသလဲ။ နိုင်ငံတွေအရေးကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် -
"နိုင်ငံတွေအရေး အနေနဲ့ နည်းပညာ၊ ပညာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု စတဲ့ ကိစ္စတွေ ဆွေးနွေးကြပြီးတော့ ဒေသတွင်း နိုင်ငံအနေနဲ့ အထူးပြုပြီးတော့ ပြောတာကတော့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ မြောက်ကိုရီးယား ကိစ္စပါ။ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကတော့ နျူကလီးယား ဖျက်သိမ်းရေး ၆ နိုင်ငံဆွေးနွေးပွဲမှာ ပြန်ပြီးတော့ ပါဝင်ဖို့အတွက် သူတို့ တိုက်တွန်းထားတာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံကတော့ ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာ စစ်အစိုးရ ကျင်းပမယ့် ရွေးကောက်ပွဲက လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတဖို့၊ အများက လက်ခံပြီး ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာလည်း ထင်သာမြင်သာရှိပြီးတော့ ထိန်ချန်ဖုံးကွယ်မှုမရှိဖို့အတွက် တိုက်တွန်းထားတာပါ။ အဲဒါကိုတော့ အာဆီယံ အလှည့်ကျဥက္ကဌ ရဲ့ ကြေညာချက်မှာလည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။"
ဒီနိုင်ငံတွေက ရွေးကောက်ပွဲကိုပဲ ပြောနေတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပတဲ့နေရာမှာ အခြေခံမယ့် ဖွဲ့စည်းပုံရဲ့ အားနည်းချက် ဆိုတဲ့ မြန်မာအတိုက်အခံတွေ ထောက်ပြနေတဲ့ အချက်ကိုရော အာဆီယံ နိုင်ငံတွေက ဖော်ထုတ်ပြောကြားတာ ရှိပါသလား။ - အာဆီယံနိုင်ငံတွေဘက်က ဖွဲ့စည်းပုံ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဆိုတဲ့ ကိစ္စကိုတော့ ပြောဆိုတာမျိုး ဆွေးနွေးတာမျိုး မကြားရပါဘူးခင်ဗျ။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နေအိမ်အကျယ်ချုပ် သက်တမ်း ထပ်ပြီးတော့ တိုးတဲ့ကိစ္စက အနောက်နိုင်ငံတွေအမြင်မှာ ရွေးကောက်ပွဲကို ယုံကြည်မှု ပျက်ပြားစေနိုင်တယ် ဆိုပြီးတော့၊ စစ်အစိုးရဘက်က အားလုံး ပါဝင်ခွင့် ပေးဖို့ ဆိုပြီးတော့ ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကဆစ်ပီရွန် ကလည်း အစည်းအဝေး အစီအစဉ်ပြင်ပ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောသွားပါသေးတယ်။"
နောက်တခုက အဲဒီ အာဆီယံ နိုင်ငံစုံ အစည်းအဝေးအပြင် နှစ်နိုင်ငံချင်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေ တချို့လည်း ရှိတယ်လို့ ကြားရပါတယ်။ -
"ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ အစည်းအဝေး အစီအစဉ်ပြင်ပ သီးခြားတွေ့ဆုံတာကတော့ မြန်မာစစ်အစိုးရ ၀န်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန် ကို ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် အဘီဆစ် ၀ိုက်ချာချီဝ က တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတွေ့တဲ့ပွဲမှာပဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်အစိုးရက ချထားတဲ့ နိုင်ငံရေး လမ်းပြမြေပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ တခြား ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေကို မြန်မာစစ်အစိုးရဘက်က ရှင်းပြသင့်တယ် ဆိုပြီးတော့ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် အဘီဆစ် ၀ိုက်ချာချီဝ က ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန်ကို တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ နောက်တခုကတော့ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ကိုယ်တိုင် မြန်မာနိုင်ငံကို သွားပြီးတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ချင်တယ်၊ ဒီလို တွေ့ချင်တာက မြန်မာနိုင်ငံအတွက် နိုင်ငံရေးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေကို ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ ထောက်ခံတယ်တာကို ပြသဖို့အတွက် တွေ့ချင်တာဆိုပြီးတော့ ထိုင်းဝန်ကြီးက ပြောပါတယ်။ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ချင်တယ်လို့ ပြောတဲ့တချိန်တည်းမှာပဲ ကမ္ဘောဒီယား ၀န်ကြီးချုပ် ဟွန်ဆန် ကလည်း ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ရာထူးက ဖယ်ရှားခံထားရတဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း တက်ဆင် က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ အတူတူပါပဲလို့ ပြောလို့ အငြင်းပွားနေတာတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ဒီ အာဆီယံ ထိပ်သီးစည်းဝေးကာလမှာ မဆီမဆိုင် ဒီလို ပြောရမလား ဆိုပြီးတော့ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်က ပြန်ချေပတာလည်း ရှိပါတယ်။ ကမ္ဘောဒီးယား ၀န်ကြီးချုပ် ဟွန်ဆန်ကတော့ လူတွေက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကြောင်းကိုပဲ ပြောနေကြတယ်၊ တက်ဆင်ကလည်း ၂၀၀၆ ခုနှစ် ထိုင်းနိုင်ငံမှာ စစ်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့အတွက် အာဏာသိမ်းမှုရဲ့ သားကောင် ဖြစ်နေတယ် ဆိုပြီးတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တက်ဆင်ကို နှိုင်းယှဉ်ပြောသွားတာပါခင်ဗျ။ ဒီကိစ္စကို ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်က ပယ်ချပြီးတော့ ထိုင်းနဲ့ ကမ္ဘောဒီးယား နှစ်နိုင်ငံအကြား နယ်စပ် ပရ၀ိဟာ ဘုရားကိစ္စ အခြေခံပြီးတော့ အငြင်းပွားနေတဲ့အချိန်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ နှိုင်းတဲ့ကိစ္စကလည်း ထပ်ပြီးတော့ ထွက်လာတာပါခင်ဗျ။"
ထိုင်းနိုင်ငံ ဟွာဟင်း အပမ်းဖြေစခန်းက အာဆီယံ ထိပ်သီးဆွေးဝေးပွဲကနေ ကိုသိန်းထိုက်ဦး ကို ဦးကျော်ဇံသာက ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာပါ။ တဆက်တည်းမှာပဲ AICHR လို့ခေါ်တဲ့ အာဆီယံ လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်မှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အမြဲတမ်း ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် အငြိမ်းစားသံအမတ်ကြီး ဦးကျော်တင့်ဆွေကို စစ်အစိုးရက ရွေးချယ်ခန့်အပ်လိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အခုလေးတင် ကျင်းပပြီးစီးသွားတဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတရပ်မှာလည်း ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ကဆစ်ပီရွန် က မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရင် လိုအပ်တဲ့ အကူအညီတွေ ပေးဖို့ ထိုင်းနိုင်ငံက ကမ်းလှမ်းထားပြီး မြန်မာဘက်ကတော့ တစုံတရာ တုံ့ပြန်ပြောကြားခြင်း မရှိသေးဘူး ဆိုတာကိုလည်း ပြောကြားသွားပါတယ်။ ( ဗွီအိုအေ )
Posted by flyingpeacock at 2:29 AM0comments Links to this post
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အထူးကြေညာချက် ၇ / ၁၀ / ၀၉
အာဆီယံထိပ်သီးများနှင့် တွေ့ဆုံမည့်အစီအစဉ် မခင်ဥမ္မာ ပယ်ချခံရ
အာဆီယံ အဖွဲ့ကြီးဟာ ဒေသတွင်း ပြည်သူတွေရဲ့ ပါဝင်ခွင့်ကို မြှင့်တင်ပြီး ပြည်သူကို ဗဟိုပြုတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတခု ဖြစ်အောင် ကြိုးစားသွားမယ်လို့ (၁၅) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲကြီးမှာ ထိုင်း ၀န်ကြီးချုပ်နဲ့ အာဆီယံ ခေါင်းဆောင်တွေက ပြောဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း မြန်မာနိုင်ငံအပါအ၀င် အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ၅ နိုင်ငံက ခေါင်းဆောင်တွေက Civil Society ခေါ် လူထုအခြေပြု လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေကို တွေ့ဆုံဖို့ ငြင်းပယ်လိုက်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို ထိုင်းနိုင်ငံကနေ ကိုသိန်းထိုက်ဦး သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအကြား သမိုင်းမှာ ပထမဆုံးအကြိမ် AIHRC လို့ခေါ်တဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ကို ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ (၁၅) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ ထိပ်သီး ဆွေးနွေးပွဲကြီးကို ထိုင်းနိုင်ငံ ဟွာဟင်း အပန်းဖြေ ကမ်းခြေမြို့မှာ ဒီနေ့ စတင်ကျင်းပပါတယ်။
ဒေသတွင်း နိုင်ငံတွေအကြား အစိုးရတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို အဓိကထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းကနေ ပြည်သူတွေရဲ့ ပါဝင်ခွင့် ပြည်သူကို ပိုပြီးဦးစားပေးတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတခု ဖြစ်လာဖို့ လက်ရှိ အာဆီယံ အလှည့်ကျ ဥက္ကဌဖြစ်တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်တွေက တိုက်တွန်းနေပါတယ်။ ထိုင်း ၀န်ကြီးချုပ် အဘီဆစ် ၀ိတ်ချာချီဝ က ထိပ်သီးစည်းဝေးပွဲ အဖွင့်မိန့်ခွန်းမှာ အခုလို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
"အာဆီယံဟာ ပြည်သူတွေရဲ့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ တန်ဘိုးတွေကို သင်္ကေတပြုတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတခု ဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်။ အာဆီယံ ပဋိညာဉ် စာတမ်းပါ အခြေခံမှုတွေကို အလေးထား လိုက်နာဖို့ ဦးတည်ကြိုးစားတဲ့တချိန်တည်းမှာ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ အခြေခံမှုတွေကို လေးစားလိုက်နာတဲ့ တိကျတဲ့ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေ ရှိရပါလိမ့်မယ်။"
အာဆီယံ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဆူရင်း ပစ်ဆူဝမ် ကလည်း ဒီနေ့ စတင်ထုတ်လွှင့်တဲ့ အာဆီယံ ရုပ်မြင်သံကြားကနေ အခုလို ပြောပါတယ်။
"ကျနော်တို့ ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေမှာ လူသန်းပေါင်း ၅၅၈ သန်းရှိပါတယ်။ ဒီ ပြည်သူတွေကို အာဆီယံ လူ့အဖွဲ့အစည်း တည်ထောင်ရေးမှာ ပါဝင်ခွင့်ရဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့အစည်းကနေ ရလာမယ့် အကျိုးခံစားခွင့်တွေကလည်း ပြည်သူတွေပဲ ရရမှာပါ။"
အာဆီယံဟာ ရည်မှန်းချက်တခုအောက်မှာ ပေါင်းစည်းနိုင်ရေး၊ ပြည်သူတွေကို မဏ္ဍိုင်ပြုတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတခု ဖြစ်ဖို့ ဦးတည်ကျိုးပမ်းနေတယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။
ဒီလို အာဆီယံ ခေါင်းဆောင်တွေက ပြည်သူတွေရဲ့ ပါဝင်ခွင့်ကို ပြောနေပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံအပါဝင် ဒေသတွင်းနိုင်ငံ စုစုပေါင်း ၅ နိုင်ငံက Civil Society ခေါ် အာဆီယံ လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းတွေက ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ် တွေကို တွေ့ဆုံဖို့ ငြင်းပယ်လိုက်ပါတယ်။
မြန်မာ၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ လော၊ ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ စကာင်္ပူနိုင်ငံတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနဲ့ စင်္ကာပူနိုင်ငံတွေကတော့ သူတို့ဘာသာ ရွေးချယ်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပဲ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
တွေ့ဆုံခွင့်ရတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုလည်း အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေက ဆွေးနွေးခွင့် မပေးခဲ့တဲ့အကြောင်း ဒေသတွင်း လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တခု ဖြစ်တဲ့ Alternative ASEAN Network အဖွဲ့က Debbie Stothard က အခုလို ပြောပါတယ်။
"အဲဒီမှာသွားတက်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေ အံအားသင့်သွားတာက မြန်မာနိုင်ငံ မူးယစ်တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့က နှစ်ယောက်ကို မြန်မာစစ်အစိုးရက လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေအဖြစ် တက်ရောက်ခွင့်ပေးထားတာကို အစည်းအဝေးခန်းထဲမှာ တွေ့လိုက်ရလို့ပါ။ ဒါကြောင့် ဒီဆွေးနွေးပွဲဟာ လူထုအခြေပြု လူ့အဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ အစိုးရအကြား ဆွေးနွေးပွဲ မဟုတ်ဘူးဆိုပြီး မလေးရှား၊ ထိုင်းနဲ့ အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံက ကိုယ်စားလှယ်တွေက အစည်းအဝေးခန်းထဲကနေ ထွက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။"
အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်နေ့ကနေ ၂၀ ရက်နေ့အထိ အခု အာဆီယံ ထိပ်သီး ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပနေတဲ့ ဟွာဟင်းအပန်းဖြေ ကမ်းခြေနဲ့ကပ်ရပ် ချာအမ်း ကမ်းခြေမှာ အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံမယ့် ကိုယ်စားလှယ်တွေကို မြန်မာနိုင်ငံ လူထုအခြေပြု လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေက ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီအစည်းအဝေးမှာ ထိုင်းအခြေစိုက် ဒီမိုကရေစီနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အင်အားစု NDD က မခင်ဥမ္မာကို လူထုအခြေပြု အဖွဲ့တွေက ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ မခင်ဥမ္မာကတော့ တွေ့ဆုံခွင့် ငြင်းပယ်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်လို့ ဗွီအိုအေကို အခုလို ပြောပါတယ်။
"Civil Society ကိုယ်စားလှယ်တွေကို အစည်းအဝေး ပေးမတတ်ဘဲနဲ့ ပယ်ချယုံတင်မကဘဲနဲ့ သူတို့လူတွေကို သူတို့ ထည့်ပြီးတော့မှ ဒီအစည်းအဝေးကို ဖြစ်အောင် ကျင်းပတာဟာ ရှင်းရှင်းပြောရလို့ရှိရင် ကျမတို့ ဒီဒေသတွင်း အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့ ပြည်သူတွေ လွတ်လပ်တဲ့ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ပြည်သူ့အဖွဲ့အစည်းတွေ Civil Society တွေအပေါ်မှာ သူတို့ လူလည်ကျတာ။ သာမန်ပြည်သူတွေကြားထဲမှာ ဒီလိုလုပ်တဲ့နည်းနဲ့ လှည့်စားပြီးတော့မှ လွတ်လပ်တဲ့ ပြည်သူ့အသံတွေကို ပိတ်ပင်ဖို့ ကျိုးစားတယ်လို့ပဲ ကျမ မြင်ပါတယ်။"
ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖေါ်ဝါရီလက ပထမအကြိမ် အာဆီယံ ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ အစည်းအဝေး တုန်းကလည်း မခင်ဥမ္မာ ပါရင် အစည်းအဝေး တက်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူး ဆိုပြီး မြန်မာစစ်အစိုးရ ၀န်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန်က ကန့်ကွက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ လူထုအဖွဲ့အစည်းတွေကို ကိုယ်စားပြုတက်ရောက်ဖို့ ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတဲ့ မခင်ဥမ္မာ အပါအ၀င် ကမ္ဘောဒီးယား၊ လော၊ ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ စင်္ကာပူ နိုင်ငံတို့က ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုလည်း တွေ့ဆုံဖို့ ငြင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှား၊ မလေးရှား၊ ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်နဲ့ ဘရူနိုင်းနိုင်ငံတွေက ကိုယ်စားလှယ်တွေကို တွေ့ဆုံဖို့ သဘောတူခဲ့ပေမယ့် အဲဒီကိုယ်စားလှယ်တွေကို အစည်းအဝေးအခန်းထဲမှာ စကားပြောဆိုခွင့် မပေးခဲ့ပါဘူး။ စကားပြောခွင့်ပေးတဲ့ တဦးတည်းသောသူကတော့ ချူလာလောင်ကွန် တက္ကသိုလ်က ဒေါက်တာ Surichai Wangaeo ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်ကတော့ တွေ့ဆုံပွဲမှာ ညှိနှိုင်းစီစဉ် ပေးဖို့ သူ့ကို မူလက ရွေးချယ်ထားတာပါ။ ဒါ့ကြောင့်လည်း ထိုင်း၊ မလေးရှားနဲ့ အင်ဒိုနီးရှား လူထုအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ စည်းဝေးပွဲကို မတက်ရောက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ စင်္ကာပူ၊ ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ မြန်မာအစိုးရတွေရဲ့လုပ်ရပ်ဟာ ဒီကနေ့ ကြာသပတေးနေ့မှာပဲ စတင် ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ အာဆီယံလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်အပေါ် ယုံကြည် ကိုးစားရမှုကို ထိခိုက် ပျက်စီးစေတယ်လို့ အာဆီယံဒေသတွင်း လူထု အခြေပြု အဖွဲ့အစည်းတွေက ဝေဖန် ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ( ဗွီအိုအေ )
Posted by flyingpeacock at 8:57 AM0comments Links to this post
အမေရိကန် လက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မြန်မာပြည် သွားမည်
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုရဲ့ လက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကာ့တ် ကမ်းဘဲလ် (Kurt Campbell) ဟာ မကြာခင် မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လာရောက်မယ့်ရက် အတိအကျကိုတော့ မသိရသေးဘူးလို့ ရန်ကုန်အခြေစိုက် အမေရိကန်သံရုံး တာဝန်ခံက ပြောတဲ့အကြောင်း NLD ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးဉာဏ်ဝင်းက ဗွီအိုအေကို ပြောခဲ့ပါတယ်။
မစ္စတာကမ်းဘဲလ်ဟာ ဒီခရီးစဉ်အတွင်းမှာ စစ်အစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံမှာ ဖြစ်သလို NLD အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်နဲ့လည်း တွေ့ဆုံမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောင်းလဲလာတဲ့ သဘောထားရဲ့ တစိတ်တပိုင်း ရလဒ်ဖြစ်မယ်လို့ လေ့လာသူတွေက ယူဆထားကြပါတယ်။ ( ဗွီအိုအေ )
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေး နအဖ စစ်သံရုံးရှေ့ ဆန္ဒပြသပွဲ ( ကိုရီးယား )
Posted by flyingpeacock at 9:03 AM0comments Links to this post
လူဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ( ၂၁ )နှစ်မြောက် ပါတီအထိမ်းအမှတ် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
မြန်မာနိုင်ငံ ကျောင်းသား လှုပ်ရှားမှု သမိုင်း (အောင်ဝေး)
Posted by flyingpeacock at 9:25 PM0comments Links to this post
တပ်မတော်အတွင်း ကြားဖြတ်အစိုးရဖွဲ့ရေး မသိရသေး
ကြားဖြတ်အစိုးရဖွဲ့ရေး ကိစ္စကို မီဒီယာများတွင် ပြောဆိုနေသည့် သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေလျက်ရှိသော်လည်း တပ်မတော်အတွင်း တစုံတရာ မကြားရသေးကြောင်း အရာရှိတဦးက ပြောသည်။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်ရန် အခက်အခဲများစွာ ရှိနေပြီး တပ်မတော်အတွင်း အုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စများ ရှုပ်ထွေးနေလျက်ရှိနေသည့် အခြေနေများအပေါ် ၎င်းက သုံးသပ်ပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်။
“ကြားဖြတ်အစိုးရ ဖွဲ့ဖို့ဆိုတာ ကျနော်တို့ဆီမှာ ဘာမှ မကြားရသေးဘူး။ ဘာတွေ ကွာဟနေလဲလို့ တိတိကျကျ မပြောချင်ပေမယ် အုပ်ချုပ်ရေးအပိုင်းမှာ တော်တော်ကို ရှုပ်ထွေးနေတာ” ဟု အဆိုပါအရာရှိက ပြောသည်။
ထို့အပြင် အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေအတွင်း တပ်အသွင်ပြောင်းများ ဆက်လက်ထားရှိရေးအတွက် အစွမ်းကုန် ကြိုးပမ်းမှုများ ပြုလုပ်နေသည်ဟု ပြောသည်။
တပ်မတော် အင်ဂျင်နီယာတပ်မှ အရာရှိတဦးက “မြန်မြန် ပြောင်းလဲချင်တယ်။ အင်ဂျင်နီယာ တယောက်လိုပဲပြောပြော၊ အရာရှိတယောက်လိုပဲပြောပြော အပြောင်းအလဲဟာ အရေးကြီးတယ်လို့ ကျနော်ထင်တယ်” ဟု ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။ ( ရိုးမ- ၃ )
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် မြို့နယ်အဖွဲ့များက တင်ပြထားသည့် ပါတီညီလာခံခေါ်ယူရေးကိစ္စရပ်ကို ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့က လက်ခံရရှိထားပြီး အလေးအနက် စဉ်းစားနေပြီဖြစ်ကြောင်း ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဦးဝင်းတင်က ပြောသည်။
“စီအီးစီအဖွဲ့အနေနဲ့ ဒီကိစ္စကို အလေးအနက်ထား စဉ်းစားနေပါတယ်။ သို့သော် မြို့နယ်တချို့က တောင်းဆိုထားသလို တလအတွင်း ကျင်းပပေးဖို့ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ကတော့ ချင့်ချိန်နေပါတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ပြီးခဲသည့်လပိုင်းအတွင်းက မိတ္ထီလာမြို့နယ်၊ သာယာဝတီခရိုင်၊ တောင်ငူခရိုင်တို့မှ ပါတီဝင်များက ပါတီညီလာခံခေါ်ယူရေး၊ ပါတီဗဟိုကော်မတီ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရေးတို့ကို ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီထံ တင်ပြထားကြသည်။
ထိုကဲ့သို့ တင်ပြတောင်းဆိုမှုများမှာ ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်သည်ဟု ပဲခူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမြတ်လှက ပြောသည်။
“ဒီတောင်းဆိုမှုကို ကျနော်တို့ ထောက်ခံတယ်။ သဘောတူတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလက တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် အစည်းအဝေး တုန်းကလည်း ကျနော်တို့က အဖွဲ့အတွင်းမှာ ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ကျင့်သုံးပြီး ဦးဆောင်မှုပေးနိုင်သူတွေကို ထပ်တင်ဖို့ တင်ပြထားတာပဲလေ။ အခုတောင်းဆိုချက်ကို ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့က လိုက်လျောမယ်ဆိုရင် ကောင်းပါတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်အစည်းအဝေးကို ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဧပြီလ (၂၈) ရက်တွင် ကျင်းပခဲ့စဉ်က ပါတီဝင် (၃၆) ဦး စုပေါင်းလက်မှတ်ရေးထိုးကာ ဦးအောင်ရွှေနှင့် ဦးလွင်တို့အနေဖြင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့မှ နုတ်ထွက်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ဖူးသည်။
ယခုအခါ မြို့နယ်ပါတီခွဲများက ပါတီညီလာခံ ထပ်မံကျင်းပရေး တင်ပြလာကြခြင်းဖြစ်သည်။
အစည်းအဝေး ထပ်မံကျင်းပနိုင်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဦးဝင်းတင်က “မကြာခင်မှာ ပါတီမှတ်ပုံတင်ရေးကိစ္စတွေလည်း လာတော့မယ်။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ဖို့ဆိုတာ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်တာ မ၀င်တာနဲ့မဆိုင်ဘူး။ ၀င်သည်ဖြစ်စေ၊ မ၀င်သည်ဖြစ်စေ ကြုံတွေ့ရတော့မယ့်ကိစ္စ။ ဆိုတော့ အောက်ခြေပါတီဝင်တွေရဲ့ အမြင်သဘောထား၊ သူတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေကို သိဖို့လိုလာပြီ။ ညီလာခံဆိုတာကတော့ အောက်ခြေမြို့နယ် အဆင့်ဆင့်မှာပါ ကျင်းပဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင် မသိနိုင်သေးဘူး။ သို့သော်ငြားလည်း အနည်းဆုံးအားဖြင့် အောက်ခြေအဆင့်ပါတီဝင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံနိုင်မယ့် အစည်းဝေးတရပ်တော့ ခေါ်သင့်တယ်လို့ မြင်တယ်” ဟု ပြောသည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တွင် ယခင်က ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ (စီအီးစီ) အပြင် ပါတီဗဟိုကော်မတီတရပ် (စီစီ) ရှိခဲ့သော်လည်း စီစီအဖွဲ့ဝင်များ ထောင်ကျခြင်း၊ ကွယ်လွန်ခြင်းများရှိခဲ့၍ နောက်ပိုင်းတွင် စီစီအဖွဲ့ ပြိုပျက်ခဲ့ရာ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးကို မြို့နယ်အဖွဲ့ခွဲများက တောင်းဆိုထားကြသည်။
“ဒီလိုတောင်းဆိုမှုတွေကို အန်တီတို့ မကွေးအမျိုးသမီးအဖွဲ့အနေနဲ့ ထောက်ခံတယ်။ ဒီလိုမှမလုပ်ရင်လည်း ပါတီက ဗဟိုဦးစီးစနစ်နဲ့ သွားနေသလိုဖြစ်နေမယ်။ ပါတီအနေနဲ့ နှစ်ပေါင်း (၂၀) အတွင်း အားနည်းတာတွေ ရှိခဲ့လို့ အစက ပြန်ပြန်စနေရတယ်။ တချို့ပါတီသစ်တွေက ပါတီစည်းရုံးရေးတွေ လုပ်ဆောင်နေကြပြီ။ ရွေးကောက်ပွဲဝင်တာ မ၀င်တာနောက်ထား၊ တရားဝင်ပါတီဖြစ်တဲ့ အန်တီတို့က အခုမှ လူငယ်အဖွဲ့တွေ၊ စည်းရုံးရေးအဖွဲ့တွေ ပြန်ဖွဲ့နေရတယ်။ သူများတွေ သိဒ္ဓတ္ထမင်းသား တောထွက်ခန်းရောက်နေမှ ကိုယ့်အဖွဲ့က ဖွားတော်မူခန်းကနေ မတက်နိုင်ရင်တော့ မဖြစ်သေးဘူး။ ဒါကြောင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့အနေနဲ့ ဒီကိစ္စအပေါ် မြန်မြန်စဉ်းစား ဆုံးဖြတ်ပေးစေချင်တယ်” ဟု ရေနံချောင်းမြို့နယ် စည်းရုံးရေးအဖွဲ့ဝင် ဒေါ်ခင်စောဌေးက ပြောသည်။ ( ခေတ်ပြိုင် )
Federal Study by ABSDF
ပြင်သစ်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောက်ခံ
အင်္ဂါနေ့က ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပဲရစ်မြို့ မြို့တော်ခန်းမရှေ့ လူအုပ်ထဲတွင် တွေ့ရသည့် ပြင်သစ်ရုပ်ရှင်မင်းသမီး Marion Cotillard
ချုပ်နှောင်ခံထားသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ထောက်ခံသည့်အနေဖြင့် တိတ်ဆိတ်စွာ သွားရောက်စုဝေးသည့် အခမ်းအနားကို တက်ရောက်စဉ် ရိုက်ကူးထားသည့်ပုံ ဖြစ်သည်။ ( မိုးမခ )
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအစိုးရမှ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးကို ဆောင်ရွက်လှုပ်ရှားနေကြသူ မြန်မာနိုင်ငံသား ( ၈ ) ဦးအားနိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ပေး
Today News in Korea
Posted by flyingpeacock at 5:46 PM0comments Links to this post
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမြန်ဆုံး လွတ်ပေးရေးအတွက် တဦးချင်း ဆန္ဒပြ တောင်းဆို
NLD 한국지는 2009년 10월 6일 화요일 오전 10시부터 12시 까지 서울시 용산구 한남동 한남 초등학교 앞 버마 군사독재의 대사관 앞에 아웅 산 수지 총장님을 즉각 석방하라고 일인 시위를 하였습니다.
၂၀၀၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၆ ရက် အင်္ဂါနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီမှ ၁၂ နာရီအချိန်ထိ ဆိုးလ် (ဆောအုလ်) နအဖ စစ်အစိုးရ လက်အောက်ခံ သံရုံးရှေ့၌ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (လွတ်မြောက်နယ်မြေ) ကိုရီးယားဌာနခွဲက ဦးစီး၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမြန်ဆုံး လွတ်ပေးရေးအတွက် တဦးချင်း ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုကြပါသည်။
NLD (LA) Korea Branch held solo demonstrated for immediately release Daw Aung San Suu Kyi in Burma, in front of Burma Junta's Embassy in Seoul from 10:00 AM to 12:00 AM on October 6, 2009.
ဂျပန်သံမှူး ဖိတ်ခေါ်မှုသည် နိုင်ငံရေး အဓိပ္ပာယ် ပြောင်းလဲမှုဟု ဦးဝင်းတင်ပြောကြား
ဂျပန်အစိုးရသစ် တက်လာပြီး မကြာမီတွင် မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာ ဂျပန်သံရုံးမှ သံမှူးက မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အတိုက်အခံပါတီ ခေါင်းဆောင်တဦးကို ခေါ်ဖိတ် ဆွေးနွေးခြင်းသည် နိုင်ငံရေးအဓိပ္ပာယ် ပြောင်းလဲမှုတခုအဖြစ် ယူဆကြောင်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူ ဦးဝင်းတင်က ပြောသည်။
“ကျနော့် အယူအဆတင် မကဘဲနဲ့ ဂျပန်အစိုးရသစ်ကလည်း တက်လာတဲ့အချိန်၊ မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာ ဂျပန်အစိုးရရဲ့ နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒတွေ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့ သုံးသပ်နေချိန်မှာ အတိုက်အခံပါတီက ကျနော့်ကို အခုလို မေးမြန်းလာတယ်ဆိုတော့ နိုင်ငံရေးအဓိပ္ပာယ် ပြောင်းလဲလာတယ်လို့ ယူဆလို့ရပါတယ်” ဟု ဦးဝင်းတင်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ရန်ကုန်တိုင်း ဗဟန်းမြို့နယ် နတ်မောက်လမ်းရှိ ဂျပန်သံရုံးမှ သံမှူးက ဖိတ်ခေါ်သဖြင့် ယမန်နေ့ ညနေပိုင်းက ၁ နာရီကြာ တွေ့ဆုံခဲ့ရာ လက်ရှိမြန်မာ့နိုင်ငံရေး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေး၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး၊ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ သဘောထားများကို တင်ပြခွင့်ရခဲ့သည်။
“ဂျပန်အစိုးရသစ်အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ဈေးကွက်စီးပွားရေး စားကျက်အနေနဲ့ သဘောမထားဘဲနဲ့၊ လက်ရှိ နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာ ပါဝင်ကူညီပေးဖို့ တာဝန်ရှိတယ်လို့လည်း ထပ်မံ တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်” ဟု ဦးဝင်းတင်က ပြောသည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွင် မကြာသေးခင်က ကျင်းပခဲ့သော မဲခေါင်ဒေသဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးတွင် ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စတာအိုကားဒါးက မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်းနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို လွှတ်ပေးရန် တိုက်တွန်းခဲ့သေးသည်။ ဤကဲ့သို့ တိုက်တွန်းခဲ့သည့်အပေါ် ကြိုဆိုလိုက်ကြောင်း ဦးဝင်းတင်က ပြောဆိုသည်။
သို့သော် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွှတ်ရန် တောင်းဆိုရာ၌ သူမအား အဖွဲ့ချုပ်ရုံး၌ ပေးထိုင်ရန်နှင့် နေအိမ်တွင် လွတ်လပ်စွာ သွားလာခွင့်ကို ရည်ရွယ်တောင်းဆိုခြင်း မဟုတ်ဘဲ၊ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ပြဿနာကို ဖြေရှင်းရာ၌ နိုင်ငံရေးနည်းနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး လုပ်ရန်၊ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး စားပွဲပေါ် ရောက်ရှိလာရန်သာ ဦးတည်ပြောဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“အစိုးရကို တိုက်တွန်းတဲ့အခါမှာ ဒီအချက်တွေကို တိုက်တွန်းပေးပါ။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ တိုက်တွန်းတာတွေ၊ NLD ပါဝင်သင့်တာတွေ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပါဝင်ဖို့ ပြောနေတာတွေကို ကျနော်တို့ လက်မခံနိုင်ဘူး” ဟု ဦးဝင်းတင်က ပြောသည်။
ထို့အပြင် ဂျပန်အစိုးရက အတိုက်အခံ အင်အားစုများကို ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန် တိုက်တွန်းနေချိန်တွင် စစ်အစိုးရအနေဖြင့် ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေအား ပြန်လည်၍ ပြင်ဆင်သုံးသပ်ရန် ကိစ္စများကိုလည်း စစ်အစိုးရကို ဂျပန်အစိုးရအနေဖြင့် တိုက်တွန်းပေးရန်လည်း သူက တောင်းဆိုခဲ့သေးသည်။
“ဒီပြဿနာကို အစိုးရ (နအဖ) က ဖြေရှင်းပေးနိုင်မှသာလျှင် ရွေးကောက်ပွဲဟာ အဓိပ္ပာယ်ရှိမယ်။ ဒီအတိုင်း ရွေးကောက်ပွဲ သက်သက်ကတော့ ကျနော်တို့ ဘာမှ ထည့်သွင်းမစဉ်းစားနိုင်ဘူး။ မစဉ်းစားတာဟာ ဘယ်အထိ အကျိုးသက်ရောက်သလဲဆိုတော့ NLD တို့၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မပါဝင်ဘူး၊ ပါဝင်ခြင်း မပြုဘူးဆိုတဲ့အထိ သက်ရောက်သွားနိုင်တယ်” ဟု သူက ပြောသည်။
ယခုလို တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်သံရုံးမှ သံမှူးအပြင်၊ သံရုံး၏ ပြန်ကြားရေးတာဝန် ယူထားသည့် မြန်မာအမှုထမ်း ဦးချိုထွန်းလည်း တက်ရောက်ခဲ့သည်။ သို့သော် ဂျပန်သံရုံးဘက်မှ တုံ့ပြန်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် အကြံပေးခြင်းမျိုး မရှိခဲ့ပါ။
ပြီးခဲ့သည့် သြဂုတ်လအတွင်းက ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဂျပန်နိုင်ငံကို နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော် အုပ်ချုပ်လာခဲ့သည့် ဂျပန် လစ်ဘရယ် ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီကို အတိုက်အခံပါတီ ဂျပန် ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီက အနိုင်ရရှိခဲ့ကာ အစိုးရသစ် ဖွဲ့နိုင်ခဲ့သည်။ (မဇ္ဈိမ)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ၀န်ကြီး ဦးအောင်ကြည် တပတ်အတွင်း ဒုတိယအကြိမ်တွေ့
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ မြန်မာစစ်အစိုးရက ဆက်ဆံရေးဝန်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ပေးထားတဲ့ အလုပ်သမားရေး ၀န်ကြီး ဦးအောင်ကြည်နဲ့ ဒီကနေ့ အစိုးရဧည့်ဂေဟာမှာ တွေ့ဆုံပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ အရေးယူ ပိတ်ဆို့ ဒဏ်ခတ်မှုတွေ ရုပ်သိမ်းရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘက်က ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေဆီကို စာရေးသား ပေးပို့ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း တပတ်အတွင်း ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် ဦးအောင်ကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး NLD ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဉာဏ်ဝင်းကို ကိုသိန်းထိုက်ဦးက ဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့အခါ ဦးဉာဏ်ဝင်းက အခုလို စပြောပါတယ်။[ ဆက်ဖတ်ရန် +/- ]
“ကျနော်တို့လည်း ထပ်တွေ့တဲ့ သတင်းပဲ သိပါတယ်။ နာရီဝက်လောက် ကြာတယ်လို့ပဲ ကြားပါတယ်။ တွေ့တဲ့အကြောင်းရင်းတော့ ကျနော်တို့ မသိပါဘူး။”
ဟိုတနေ့က တွေ့တာကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘက်က ရေးထားတဲ့ စာပေါ်မှာ အခြေခံပြီးတော့ တွေ့တယ်လို့ သတင်းစာမှာ ရေးပါတယ်။
“ဒီနေ့တွေ့တာလည်း အဲဒါရဲ့ အဆက်ဖြစ်ဖို့ ကျနော်တို့ ယူဆတယ်။”
ငါးရက်အတွင်းမှာ နှစ်ကြိမ်တွေ့တယ်ဆိုတော့ အရင်ထက်စာရင်တော့ တွေ့တာက နည်းနည်းလေး ပိုပြီး စိပ်လာတယ်လို့ ပြောလို့ရမှာပေါ့။ ဒီအပေါ်မှာရော NLD အနေနဲ့…။
“ကောင်းပါတယ်၊ ချက်ချင်း ဖြေကြား၊ မေးမြန်း၊ ဒါမျိုးတွေ ရှိမှာပေါ့လေ။ တွေ့တာတော့ ကျနော်တို့က ကြိုဆိုပါတယ်၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်။”
NLD CEC က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဖို့အတွက် တောင်းဆိုထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီကိစ္စရော အခြေအနေ ဘာများ ထူးပါသလဲ။
ရှေ့နေအဖွဲ့နဲ့ တွေ့ဖို့တောင်းထားတာ အယူခံမှုကို ပြင်ဆင်ချက် တင်ဖို့လားခင်ဗျ။
တောင်းဆိုချက်ကရော တစုံတရာ ဟိုဘက်က တုံ့ပြန်မှု ထူးခြားမှု ရှိပါလားခင်ဗျ။
“ကျနော်တို့တောင်းထားတာ ဒီနေ့ပါပဲ။ ဒီနေ့တော့ ဟိုဘက်မှာ ဒေါ်စုက ပိုမိုအရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စဆိုတော့ ကျနော်တို့ကို ရွှေ့ဆိုင်းတဲ့သဘော ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။”
NLD ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးဉာဏ်ဝင်းကို ကိုသိန်းထိုက်ဦး ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ( ဗွီအိုအေ )
Posted by flyingpeacock at 9:05 AM0comments Links to this post
ကုလသမဂ္ဂ အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာကတော့ အခုလာမယ့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို အများက လက်ခံယုံကြည်ဖို့ဆိုရင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား အားလုံးကို လွှတ်ပေးဖို့ လိုမယ်လို့ တောင်းဆိုထားကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခု ကြည့်ရတဲ့ပုံကတော့ စစ်အစိုးရအနေနဲ့ ဒီ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် လုပ်နိုင်ဖို့ အရေးပါတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား အချို့ကို ဆက်ပြီး ထိန်းထားလိုတဲ့သဘော ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင်မှာကို အစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ အဖမ်းအဆီးတွေ ပိုပြီးတောင် များလာနိုင်တယ်လို့လည်း လေ့လာသူအချို့က ယူဆပါတယ်။ ( ဗွီအိုအေ )
ဒေါ်စုအယူခံ ပယ်ခံရတာကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲအပေါ် ယုံကြည်မှု ထိခိုက်
ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နေအိမ်အကျယ်ချုပ် အယူခံကို ပယ်ချလိုက်တာဟာ မြန်မာစစ်အစိုးရဘက်က ၂၀၁၀ ခုနှစ် ကျင်းပမယ့် ရွေးကောက်ပွဲကို လူအများ လက်ခံယုံကြည်အောင် ကျင်းပလိုတဲ့ ဆန္ဒမရှိဘူးဆိုတာ ပြသလိုက်တာဆိုပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် သောမတ်စ် အိုဟေး ကင်တားနား (Tomas Ojea Quintana) က ပြောဆိုပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီကို တင်သွင်းတဲ့ သူ့ရဲ့ အစီရင်ခံစာမှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေဟာ နေရာတိုင်းမှာ အထူးစိုးရိမ်ရတဲ့ အနေအထားလို့ ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ အကြောင်းစုံကို ကိုသိန်းထိုက်ဦးက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် သောမတ်စ် အိုဟေး ကင်တားနားက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေ၊ အထူးသဖြင့် နယ်စပ်ဒေသတွေက လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရမှု အခြေအနေဟာ ပိုပြီးတော့တောင် ဆိုးဝါးလာနေတယ်လို့ အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
လာမယ့် အောက်တိုဘာ ၂၂ ရက်နေ့ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေကို သူ အစီရင်ခံဖို့ ရှိပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အစီရင်ခံစာမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အယူခံကို စစ်အစိုးရ တရားရုံးက ပယ်ချခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ …
“မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု ဒဏ်တွေကို နှစ်ရှည်လများ ခါးဆီးခံခဲ့ရသူ တယောက်ပါ။ စစ်အစိုးရရဲ့ တဖက်သတ် ဥပဒေမဲ့ ဖမ်းဆီးမှုကို ခံနေရသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နေအိမ်အကျယ်ချုပ် အယူခံကို ပယ်ချလိုက်တာဟာ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ကျင်းပမယ့် ရွေးကောက်ပွဲကို လူအများ လက်ခံယုံကြည်အောင် ကျင်းပလိုတဲ့ဆန္ဒ မရှိဘူးဆိုတာ စစ်အစိုးရဘက်က ပြသလိုက်တာပါ။ သူ့အပေါ် စွဲဆိုထားတဲ့ အမှုတွေကို ချက်ချင်း ရုပ်သိမ်းပြီး ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ လိုပါတယ်” လို့ ပြောဆိုသွားပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်း မြန်မာစစ်အစိုးရဘက်က ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာ တရားမျှတပြီး လွတ်လပ်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတခုဖြစ်အောင် ကျင်းပမယ်လို့ အာမခံထားပါတယ်။ မစ္စတာ သောမတ်စ် အိုဟေး ကင်တားနားက…
“မြန်မာစစ်အစိုးရဟာ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်းပါ အချက်တွေကို လေးစားလိုက်နာပြီး လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုစည်းရုံးခွင့်တွေကို အသိအမှတ် ပြုရပါလိမ့်မယ်။ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းချခံနေရသူ အားလုံးကို လွှတ်ပေးရပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ သူတို့ကျင်းပမယ့် ရွေးကောက်ပွဲကို နိုင်ငံတကာက ယုံကြည်လာအောင် ကျင်းပနိုင်မယ့် အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေပါ။ ဒါတွေလိုက်နာဖို့ လိုပါတယ်” လို့ ပြောဆိုသွားပါတယ်။
နယ်စပ်ဒေသတွေမှာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေကို ပဋိပက္ခမှာ ပါဝင်နေတဲ့ အဖွဲ့ပေါင်းစုံက ကျူးလွန်နေပါတယ်။ ဒီကိစ္စက အထူးအလေးထားပြီး စစ်အစိုးရက အမြန်ဆုံး ဖြေရှင်းရမယ့်ကိစ္စ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တခုက မြန်မာပြည်သူတွေ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနဲ့ အထွေထွေ အကျပ်အတည်းတွေပါ။ ဒီကိစ္စတွေကိုလည်း စစ်အစိုးရက အရေးယူ ဖြေရှင်းဖို့ လိုအပ်ပါတယ်ဆိုပြီး ပြောဆိုသွားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေ တိုးတက်လာဖို့အတွက် လူ့အခွင့်အရေးကို ကန့်သတ်တဲ့ ပြည်တွင်းဥပဒေတွေကို ရုပ်သိမ်းရမယ်၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အားလုံးကို လွှတ်ပေးရမယ်။ စစ်တပ် တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို လူ့အခွင့်အရေးကို လေးစားလိုက်နာအောင် သင်တန်းတွေ ပေးရမယ်။ နောက် တရားရေးစနစ်ကို လုံးဝလွတ်လပ်တဲ့ တရားစီရင်ရေးဖြစ်အောင် ပြောင်းလဲရမယ်လို့ မစ္စတာ ကင်တားနားက အစီရင်ခံစာမှာ အဆိုပြုထားပါတယ်။
သူဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က မြန်မာနိုင်ငံကို သွားရောက်ခဲ့ပြီး လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေတွေကို လေ့လာခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ အခု မြန်မာနိုင်ငံကို နောက်တကြိမ် ပြန်သွားဖို့ စစ်အစိုးရကို တောင်းဆိုထားပေမဲ့ အခုအချိန်အထိ စစ်အစိုးရက လာရောက်ခွင့် လက်ခံတယ်လို့ အကြောင်းမပြန်သေးပါဘူး။
ဒီလအတွင်း သူ နယူးယောက်မြို့ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံကို လာရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ စစ်အစိုးရရဲ့ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ သံအမတ်ကြီးတွေကတဆင့် တစုံတရာ အကြောင်းပြန်ကြားချက် ရမယ်လို့ မျှော်လင့်တဲ့ကြောင်း ဗွီအိုအေကို ပြောဆိုသွားပါတယ်။
Posted by flyingpeacock at 9:12 AM0comments Links to this post
Posted by flyingpeacock at 10:49 AM0comments Links to this post
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုမှ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ၂ နှစ်ပြည့်အချိန်တွင် စစ်အစိုးရက သံဃာထုအား ၀န်ချတောင်းပန်ခြင်းပြုရန်နှင့် ထိုသို့မပြုပါက ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ သံဃာတော်များကို စစ်အစိုး ရ အား ဆက်လက်၍ သပိတ်မှောက် ကံဆောင်ရန် နှိုးဆော်ထားခြင်းကြောင့် ပြည်ပရှိ သံဃာတော်များက ယခုကဲ့သို့ ကံဆောင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။“စစ်အစိုးရကို ပတ္တနိက္ကုဇန ကံဆောင်ပြီး ဖမ်းဆီးထားတဲ့ ဦးဂမ္ဘီရ အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို လွှတ်ပေးဖို့ ဦးပဉ္ဇင်း တို့ တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာမှထူးခြားမှုမရှိလာဘူး။ ဆက်ပြီးတော့လည်း ရဟန်းသံဃာတွေ၊ ပြည်သူတွေကိုဖမ်းနေတယ်။ ဒါကြောင့် ဦးပဉ္ဇင်း တို့က ဒီကံကို ထပ်ပြီးဆောင်တာဖြစ် တယ်” ဟု ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ သာသနာ့ဥသျှောင်အဖွဲ့ဝင် ဆရာတော်တပါး က ဧရာဝတီသို့မိန့်သည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရှိ မြန်မာစာသင်သား သံဃာတော်တို့က ကော့ဗဇား မြို့အနီးရှိ မဟားစိုးလ် မြစ်ကို ရေသိမ် အဖြစ်သတ်မှတ်၍ တတိယအကြိမ် ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇနကံဆောင်ကြသကဲ့သို့ သိရီလင်္ကာရောက် ရဟန်းသံဃာများ ကလည်း သိမ်ဝင်သူ သံဃာတို့၏ ကံဆောင်မှုကို သဘောတူ သာဓုခေါ်၍ ကံဆောင်ကြသည်ဟု ဆိုသည်။
“ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇနကံကို လှန်တဲ့ကံမပြုမချင်း ဒီတိုင်းပဲရှိနေမှာပဲ။ ကံဆောင်မယ်လို့ဆိုရင် ဦးပဉ္ဇင်းတို့က သဘော တူ သာဓုခေါ်လိုက်ရင် ကံမြောက်တာပဲ။ အားလုံးညှိနှိုင်းကြပြီး ကောင်းတဲ့အဖြေရှာဖို့ ဦးပဉ္ဇင်းတို့က တောင်း ဆို ချင်ပါတယ်”ဟု သီရိလင်္ကာမှ မြန်မာစာသင်သား သံဃာတော်တပါးက ဆိုသည်။
အိန္ဒိယရောက် မြန်မာသံဃာ တော်များကလည်း နယူးဒေလီမြို့အရှေ့ဘက်ရှိ ယမုံနာမြစ်ကို သိမ်သမုတ်ကာ ကံဆောင်ခဲ့ကြသည်။
“သံဃာတွေကို ထောင်သွင်းအကျဉ်းချ၊ နှိပ်စက်တာတွေ လုပ်နေတာဟာ သံဃာတွေနဲ့ သာသနာအတွက် အန္တရယ်ပဲ။ ဒါကို ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ ဘုရားရှင် ညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်း ရေရှည်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဒီပ၀ါယနာပွဲမှာ ဒီကံကို ထပ်ဆောင်တာပဲ”ဟု သာသနာ့ဥသျှောင်အဖွဲ့ အိန္ဒိယ ဌာနခွဲ ဥက္ကဌ ဆရာတော် ဦးပညာဇောတ က မိန့်သည်။
ပြည်တွင်းရှိ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ မြင်းခြံ၊ ပခုက္ကူ စသည်မြို့များတွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများနှင့် သံဃာ တော်များကို အရပ်ဝတ်နှင့် ရဲများက စောင့်ကျပ် ကြည့်ရှုခြင်းများရှိနေသည်ဟု ဒေသခံများက ဆိုသည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင်းတွင်လည်း စစ်ကားများ ရဲကားများလှည့်လည်နေပြီး ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ၊ ဘုရားများ အနီးတွင် လုံခြုံရေးများ တင်းကျပ်စွာချထားသည်ဟု မြို့ခံများကဆိုသည်။
ရန်ကုန်မြို့ရှိ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစု အဖွဲ့ခွဲမှ သံဃာတော်များက တတိယအကြိမ် ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇနကံဆောင်ရန် စီစဉ်ခဲ့သော်လည်း လုံခြုံရေး တင်းကျပ်နေသည့်အတွက် သိမ်ဝင်၍ မပြုလုပ်ဖြစ်ကြောင်း အဖွဲ့ဝင်ဆရာတော် တပါးက မိန့်သည်။
“အခုဒီမှာက သူတို့တွေတအားရှုပ်နေတယ်။ စီစဉ်ထားတာ မလုပ်ဖြစ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် တခြားသူတွေ ကံဆောင်တာကို သဘောတူပါတယ်ဆိုပြီး သာဓုခေါ်လိုက်ရင် ကံဆောင်တာအောင်မြင်တယ်လို့ ယူဆ မှတ်ယူလို့ရတယ်။ တခြား ပြည်တွင်းပြည်ပက သံဃာတွေ ကံဆောင်တာဟာ ကောင်းတာလုပ်တာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် သဘောတူ သာဓုခေါ်ပါတယ်”ဟု ကံဆောင်သည့် ဆရာတော်တပါးက မိန့်ကြားသည်။
စစ်အစိုးရက ၂၀၀၇ခုနှစ် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး နောက်ပိုင်းတွင် သံဃာတော်များ ခရီးသွားလာ သီတင်း သုံး နေထိုင်ရာတွင် အထူးတင်းကျပ်ခြင်း၊ ကျောင်းတိုက်များကို စောင့်ကျပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် စစ်ဆေး မေးမြန်း ဖမ်းဆီးခြင်းများကို ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။
ယင်းသံဃာအဖွဲ့က အကျဉ်းကျသံဃာတော်များကို ပြန်လွှတ်ရန်၊ လွန်ခဲ့သည့် ၂ နှစ်က မေတ္တာပို့လမ်း လျှောက် ဆန္ဒပြခဲ့သော သံဃာတော်များအပေါ် ပြုမူထားသည်များကို လာမည့် အောက်တိုဘာ၂ ရက်နေ့ နောက်ဆုံး ထား၍ သံဃာထုကို တောင်းပန်ရန် အာဏာပိုင်တို့ကို တောင်းဆိုထားသည်။ တောင်းဆိုချက် များကို အာဏာ ပိုင်တို့က မလိုက်လျောပါက အောက်တိုဘာ ၃ ရက်နေ့မှ စ၍ ငြိမ်းချမ်းသော သံဃာ လှုပ်ရှား မှုများ ပြုလုပ် ပြီး ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုသွားမည်ဟု ထုတ်ပြန် ကြေညာထားသည်။
ထိုသို့ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက် ထွက်လာသည့် သြဂုတ်လတွင်းမှ စတင်၍ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများတွင် လုံခြုံရေးများ ချထားခြင်း၊ သံဃာတော်များကို စောင့်ကျပ်ကြည့်ရှုခြင်းတို့အပြင် အနယ်နယ် အရပ်ရပ်ရှိ ဆရာတော် သံဃာတော်များအပါအ၀င် တက်ကြွသူ လူငယ်များကို အာဏာပိုင်များက ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခဲ့ သည်။
ထိုဖြစ်ရပ်ကို စစ်အစိုးရက ပြန်လည် တောင်းပန်ခြင်း မပြုသဖြင့် နိုင်ငံအနှံ့မှ သံဃာတော်များက ၂၀၀၇ စက်တင် ဘာ ၁၈ ရက်မှစ၍ အာဏာပိုင် တို့ကို ပတ္တနိကုဇ္ဇန ကံဆောင် သပိတ်မှောက်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် သံဃာ တော်များ မေတ္တာပို့ ဆန္ဒပြ ကြွချီရာမှ လူထု လှုပ်ရှားမှု အသွင်သို့ ကူးပြောင်းခဲ့သည်။ အာဏာပိုင် တို့က စက်တင်ဘာ ၂၆ နှင့် ၂၇ ရက်နေ့တို့တွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဆန္ဒပြမှုများကို အကြမ်းဖက် ပစ်ခတ် ဖြိုခွင်း ကာ သံဃာနှင့် သီလရှင်များကို ဖမ်းဆီး တရားစွဲပြီး နှစ်ရှည် ထောင်ဒဏ်များ ချမှတ်လိုက်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း ၏ ဖော်ပြချက်အရ မြန်မာပြည် အနှံ့ အကျဉ်းများထောင်များရှိ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၂၀၀၀ ကျော်ထဲတွင် သံဃာ ၂၃၇ ပါး ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။ ( ဧရာဝတီ )
Posted by flyingpeacock at 10:39 AM0comments Links to this post